Author: Miriam Cihodariu
Miriam dia mpikaroka eran'izao tontolo izao ary yogi. Tiako ny mijery ireo sakafo eran-tany sy mamaky tantara foronina eran'izao tontolo izao. Rehefa tsy sahirana aho, Manitatra ny fanangonana dite aho ary mandany fotoana misimisy amin'ny saka manodidina. - Afaka tsindrio eto raha antsoy aho
Fotoana famakiana: 6 minitra Ny iray amin'ireo zavatra tsara indrindra momba ny Italia ho toy ny vakansy toerana dia fa tsy zavatra fotsiny ny siny rangotra, ratra kely eny list. Afaka niverina tany Italia indray ary indray, ary mbola tsy ampy ny amin'io tany sy ny matsiro manjo, nor…